Thank you Jodasy... et al | rafozan-doza
Thank you Jodasy... et al
Published on 04/17,2011
Tsy hitanareo otran'ny injuste ve ny hoe fomba nitantarana an'ny evanjely? eny e, marina sy ekeko hoe i jesoa izany no tena hoe rola ao ary ny tantarany no tena hoe ifotoran'ny hoe finoana kristianina... kanefa hoy aho hoe misy ihany ny zavatra/olona somary no-diaboliser-na na hoe tsy nomena toerana araka tokony ho izy hoy aho... eo ihany koa ireo nomena toerana be laotra kanefa azo nokihanina hoy aho.
Voalohany @ izany dia i Jodasy. I lery moa izany 1 t@ ireo apostoly nalaza t@ hoe mpianatra namadika an'i jesoa. Ny fahitan'ny olona sy ny hoe tacitement nampianarin'ny fiangonana izany dia hoe i lery no tena bandy fopla sy tsy fanao enao. Kanefa ny lafiny tsy mba notenenina dia hoe ra tsy namadika an'i jesoa anie i lery ka tena mety lasa zavatra hafa mintsy ny tantara ee. Eny e, ekeko tsara hoe tsy noterena izy ary safidy malalaka ny azy ny hamadika ary heloka be izany hoe mamadika izany indrindra hoe tsy hita izay fahotana nataon'i jesoa... na izany na tsy izany anefa dia efa izay no zava-nitranga hoe noho ny famadihany no nahavoafantsika an'i jesoa. Dia izay ee, ra tsy maty teo i jesoa dia mazava hoazy fa tsy afaka nitsangana t@ maty koa... kozy ra mba nisy nino tao lery ra ohatra ka nivazavaza eran'ny tanana hoe za no tena zanak'A/tra kanefa matin'ny aretina ohatra? enfin, tsy maintsy hisy foana moa ny vendrana sy ny minomino foana... fa hoy aho hoe element essentiel teo @ tantaran'i jesoa izy ary tokony omena toerana ambony toy ny an'i Piera hoe nitantana ny fiangonana voalohany... i jodasy no anisan'ny fototra lehibe nampisy ny finoana an'i kristy.
Dia eto @ izay no tena hoe mampa-nandra sy dondrona tanteraka ny apostoly ambiny: jereo eto. Zany hoe i jesoa alou izany efa kopy hoe i lery no hamadika fa ozy hoe tsy koi fa satria izay no efa voasoratra. Izany hoe manaiky ihany zany lery hoe misy ilana azy ihany i jodasy na dia somary nomeny fampitahorana kely ihany aza hoe ataoko maneman elah refa mitsanga na ah. Fa ny tena hoe gne? be @ le kozy dia i jesoa efa nilaza ampahibemaso hoe "voalazanao" dia mbola tsy ni-reagir ihany ny apostoly vendrana. Tsy haiko alou fa ra misy hoe olona hajainao be ve sady heverinao hoe mesia sy zanak'A/tra no efa hita hoe nanao fagagana bedabe no miteny hoe i simp no hamadika ahy, dia mbola avela handende eraky ny tanana ihany i simp fa tsy mba afatotra @ vatakazo na hoe anio alina fotsiny aza?? ka hoy aho hoe ny apostoly no bandy fopla miaraka @ i jodasy tao!!
Faharoa manarakaraka an'izany, dia i Pilato. Ity indray alou tsy dia tena fiampangana be ataon'ny fiangonana fa hitako somary awesome fotsiny lery ee. Hoe tena kobon'lery fa tsy meloka akoriny i jesoa fa zalozy ny mpiampanga kanefa refa nolanjaina ny hoe hisy rotaka sy ny hoe hamantsika an'i jesoa dia hoe miala tsiny miala fondro miala satroka fa ianareo izany no manameloka azy. Tena mpanao politika kinga sy taktisiana mahery lery. Ny tiako tenenina hoe tsy tokony jerena @ lafiny hoe ratsy toetra sy otran'zany izy satria ra olona normale tsy maintsy nanao otranazy daholo... sady izay ah, ny tena milay @ lery, ny katolika rehetra eto ambonin'ny tany dia mahatadidy an'lery doly sady tsy maintsy manonona ny anarany isank'alahady... ary na dia ho ovaina tahaka ny inona ny hoe faneke-pinoana an'ny katolika dia tsy ho esorina ao mihintsy ny anarany satria tsy maintsy tenenina ny hoe maty i jesoa... dia izay ee, eo ho eo @ 1.147 lavitrisa eo ho eo mahalala sy manonona ny anarany isank'alahady ... pilat, you're awesome!!
Farany, ary ity no tena hitako fa tena hoe tsy milay indrindra dia ny momba an'ilay razoky hoe Simona. Ny fototra lehibe an'ny hoe fanajana sy hoe fanekena an'i jesoa izany dia hoe satria izy nitondra ny hazofijaliana noho ny otantsika. Maty noho ny otantsika ary nitsangokovelona mba ho famonjena antsika tsirairay avy... or, i simona koa mba nanampy an'lery tao ihany... donc, sao dia mba tokony omena voninahitra sy hoe "credit" kely lery fa iza no mahita an'ze fijaliana nozakain'lery tao. Eritrereto hoe bandy avy niasa tanimbary milanja angady ande hody efa reraka mafy iny no forcer-na hilanja hazofijaliana hiakatra tendrombohitra. I jesoa @ io sady efa kely endaka (mpandrafitra fa tsy hoe mpanao body building) no sady efa maty lako nandritra ny adiny iray. Mazava hoazy fa i simona no tena nilanja ny tena lakroa... ny tiako tenenina hoe tokony mba atao jesoa sy simona le tantara, otran'ny hoe batman et robin (fa tsy hoe batman tout court)... dia izay ee, misaotra anao ry simona nanampy an'lery fa ra tsisy anao mety maty teny antenatenany izy
Posted by simplex at 17:46 Hametraka hevitra (8) ¦ Verindrohy (trackback) (0) ¦ Rediredy